Articles Published in February, 2014 | Sagal Radio Services
Ciidamada Kenya ee Qaybta ka ah AMISOM oo ka baxaya Kismaayo
Ciidanka Kenya ee qaybta ka ah howlgalka AMISOM ayaa la xaqiijiyay inay ka baxaan magaalada Kismaayo ee xarunt gobolka Jubbada Hoose, halkaasoo ay 2012 ka qabsadeen xoogagga Al-shabaab.
Allaha U Naxariistee C/risaaq Xaaji Xuseen Waxa Uu Ahaa Halyeey Geesi Waddani Ah Oo Ka Baxay Ummadda Soomaaliyeed
Allaha U naxariistee, Ra’iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya, Marxuum C/risaaq Xaaji Xuseen, waxa uu ku geeriyooday Isbitaal ku yaalla magaalada Maniples ee dalka Mareykanka, halkaas oo uu in muddo ah ku xanuunsanayey, waxa uu u geeriyooday xanuunka sanbabada ah.
Ra’iisul Wasaare Cabdiweli oo ka tacsiyeeyey geeriddii naxdinta lahayd ee ku timi C/risaaq Xaaji Xuseen: “ Guddi aas qaran qabanqaabiya ayaan u xilsaarnay”
Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka ee Soomaaliya mudane C/weli Shiikh Axmed Maxamed ayaa ummadda Soomaaliyeed uga tacsiyeeyey geeridii naxdinta lahayd ee ku timi Ra’iisul Wasaarihii hore ee Soomaaliya allaha u naxariistee C/risaaq Xaaji Xuseen oo ku geeriyooday dalka Maraykanka.
Iska hor imaad ciidamada dowladda iyo dadka deegaanka ku dhex maray duleedka degmada Balcad
Sagal Radio Services • News Report • February 2, 2014
Iska hor imaad u dhaxeeya ciidamada Maamulka degmada Balcad iyo dadka deegaanka ayaa saakay ka dhacay Tuulo qiyaastii 20-KM dhinaca bari ka xigta oo lagu magacaabo Yaaqle, iyadoo dagaalkan uu ka dhashay dhimasho iyo dhaawac.
Dhagayso:- Madaxweyne Xasan sheekh oo Muqdisho ku laabtay Kana warbixiyeey shirkii Madaxda Qarada afrika
New America Media • Audio/News Report • February 2, 2014
Madaxweynaha soomaliya Xasan sheekh Maxamuud ayaa kusoo laabtay Caasimada soomaliya ee Muqdisho kadib shir uu magaalada Addis ababa uga qayb galay kaas oo ay yesheen Madaxda Qaarada Afrika isla markasna looga hadlayeey Xaalada Sudaan iyo qodobo kale.
Ciidamada Kenya oo bilaabay dhaqaaq ay ku faarujinayaan magaalada Kismaayo
Ciidamada Kenya ee qeybta ka ah howl galka AMISOM ayaa bilaabay dhaq dhaqaaq ciidan oo ay ku faarujinayaan qeybo ka mid ah magaalada Kismaayo oo ay saldhigyo ku leeyihiin, iyagoo lagu bedeli doono Ciidamada Sierra Leone.